Telefoonada Android waxay noqdeen qayb muhiim ah oo ka mid ah nolol maalmeedka nin casriga ah ee. Laga soo xiriir si cadaymaha si Calendar, iyagu waxay leeyihiin oo dhan iyaga gudaha. Our noloshooda oo dhan jajabkii iyo gogo 'oo ay ku jiraan waqtiyo aad noo gaarka loo leeyahay waa in qalabka our android. Sidaas, ka telefoonka ah android badiyay xogta si toos ah loola jeedaa in aad tahay qof ee u dhibaato badan in aad nolol maalmeedka sidoo kale. Daryeel Waxaa jira sababo badan oo keeni kara in khasaaro xog ku saabsan qalabka android. Ugu dhexdooda waxay kala yihiin:
Si aad u qaldan yahay aadanaha; waxaan oo dhan waxay leeyihiin kuwa daqiiqado markii si qalad ah ama degdeg waxaan riix badhanka ah waa in aynaan haysan, laga badiyay xogta oo dhan. Waxay sidoo kale noqon kartaa wax aan qiimo lahayn sida Diintooda "tirtirto" doorasho ama wax sida ugu waaweyn sida dib warshad.
Mararka qaarkood hab khaldan android qalliinka ayaa sidoo kale keeni kartaa in xog dhab ah. Cillad OS ayaa laga yaabaa in la keena wax user sameeyey ama laga yaabaa Dicumintiyo ah in update ama wax la mid ah. Siyaabo Ama, waxaad ogaan waa xun marka aad u badan oo dhan xogta laga badiyo isla.
Shidista ROMS Custom
soo afjarno android ah marka si habboon loo sameeyo ma keeni khasaaray xogta. Laakiin biligleynaya ROMS caadadii in phone android rujin, taas oo ku xidhan sida aad adiga u sameeyey, waxay keeni kartaa in qaar ka mid ah halis ah gaartay xogta.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ku Android
Waa ifafaale ah in ay dadka jecelyihiin inay tirtirto files ku shubtaan taleefanadooda iyagoo Android, sidoo kale in ay soo daataan meel dheeraad ah waxyaabaha cusub ama aad rabtid in ay ka saarto xogta sacoto jir aan la rabin. Si kastaba ha ahaatee, waa ay dhacdo had iyo jeer in ka dib markii Kabcada_, si ay ugu helaan in ay tirtiray qaar ka mid ah files muhiim ah. Haddii aad ku jirtid xaalad la mid ah, waxa kuu samayn doonaa soo socda ah? Yourselft Saarra oo u gacangelisid inay la soo ceshano files tirtiray qalabka Android aad mar dambe? Ha, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) inuu ka soo kabsado files tirtiray ka qalab Android aad.
Fiiro gaar ah: Waad la filayaa in ay sameeyaan wax ka dib markii si qalad ah 2 tirto faylasha qalabka Android aad: 1) .Jooji la isticmaalayo qalab Android aad isla markiiba. Kuwani files tirtiray aan tageen laakiin ay jiraan meel on qalab aad, sugaya in laga tirtirayaa by xog cusub. Haddii aad sii waddo isticmaalkooda qalabka Android, ka dibna xogta cusub oo la ahbaa doonaa. Markaas waxaa jiri doona fursad ay ku soo kabsadaan mar dambe. 2). Raadi kombiyuutar, rakibi Wondershare Dr.Fone for Android, diyaar u ah inay soo kabsadaan files tirtiray qalabka Android noqon.
# 1 software adduunka ayaa soo kabashada file deg deg ah, fudud oo si sahlan loo isticmaali Android Devices
Kabashada Support of noocyada kala duwan file: photos, video, xiriirada, fariimaha qoraalka ah, audio, wac taariikhda, taariikhda chat WhatsApp, Documents, iwm
Xiriirada dhoofinta sida file .VCF, taas oo si sahlan si aad u dajiyaan xiriir mar kale dib ugu soo telefoonka aad Android.
Fariimaha qoraalka ah dhoofinta iyo taariikhda chat WhatsApp sida CVS, XML, HTML, iwm
U shaqeeya 2000+ qalabka Android, oo ay ku jiraan Samsung, HTC, LG, Motorola, iwm
Tallaabada 1. Orod barnaamijka oo lagu xiro qalabka Android aad
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone for Android in aad laptop ama computer. Sug rakibo si ay u buuxiyaan oo aan bilowno software ah. Aad Isku qalab android in laptop ama computer taasi oo ka cable USB ah.
Tallaabada 2. Download iyo Run Wondershare MobileTrans
U baahan yahay hab debugging USB ah in in karti loo qalabka android in ay oggolaadaan in Wondershare Dr.Fone in la aqoonsado qalabka android.
Sida ugu dhakhsaha badan Wondershare Dr.Fone aqoonsan qalab android aad shaashad idiin muuqan doonaa ka warrami in qalabka uu diyaar u yahay in la marsiiyey. Hit "Next" in la sii wado.
Tallaabada 3. Dooro nooca file aad Android u soo kabashada
Haddii telefoonka rujin android, waxaad u baahan doontaa inaad keento Superuser ogolaansho in Wondershare Dr.Fone. Si fudud wax miiran "ogolow" marka pop-up uu ugu qoran shaashada weydiisanaya ogolaansho ah.
Phone ayaa haatan noqon doonaa diyaar u ah inay la marsiiyey iyo Wondershare Dr.Fone weydiin doonaa nooca files in aad rabto in aad u iskaan. Hubi ama uncheck sanduuqyada ku xiran shuruudaha aad.
Tallaabada 4. Scan iyo soo kabsadaan ka lumay qalabka Android aad
Shaashadda xigta waxay soo duuli doonaa weydiinaya in aad dooratid nooca scan. The "Mode Standard" eegi doonaa labada files tirtiray iyo sidoo kale kuwa hadda jooga on qalab aad. The "Advanced Mode" waxaa loogu talagalay markii Standard Mode oo keliya kuma filna. Dooro habka caadiga ah ee hadda iyo ka dhacay "Next".
Ka dib markii raadinaya files qalabka Android aad, Wondershare Dr.Fone muujin doonaa natiijooyinka sida hoos ku qoran. Hubi alaabta in aad rabto in la soo celiyo iyo dhufatey "Ladnaansho" button in soona qalab android aad.
Talooyin: Sidee si aad u hesho Android galay Recovery Mode
Iyada oo ku xidhan nooca qalab aad adigu leedahay, waxaa jira wax yar ka duwan hababka si aad u hesho hab dib u soo kabashada. Waxaan la soo muuqan doonaa hababka galaya hab dib u soo kabashada laba ka mid ah noocyada ugu caansan aaladaha android.
Gelida hab kabashada qalabka Google Nexus ah
ku hay hoos u muhiim ah Power ka dooro Power off. Markaas Press iyo qaban muhiim ah Power iyo muhiimka ah Volume hoos. Haddii aad aragto mascot cagaaran android, aad ku jirto xaalad soo kabsasho.
Gelida hab kabashada qalabka Samsung ah
ku hay hoos u muhiim ah Power ka dooro Power ka baxsan si ay u xidho qalabka. Press iyo hay furaha Power, muhiimka Volume ilaa, iyo wada button Home ah. Fur marka aad aragto logo Samsung.
Sidee si aad u hesho Android ka mid ah Recovery Mode
Dul fursadaha hab kabashada isticmaalaya ilaa xoogga iyo awoodda hoos furayaasha in ay helaan "Boot System Hadda" doorasho. Waxaa Dooro badhanka awood. Qalabka wuxuu ka tegi doono niyadda kabashada iyo dib uga bilowdo sida caadiga ah.
> Resource > Android > Android Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ku Android